Sales Admin | Mega Marine Frozen Seafood Company Limited ﻿
13.12.2019, Full time , Export / Import / Trading
• At least 1 year experiences in sales or admin fields
• Able to use MS office (Word, Excel) and email & internet
• Good interpersonal skill and learning skill
We offer •	Female (1) post
•	Working days - Mon to Fri (9:00 am to 5:30 pm) Sat (9:30 am to 3:00 pm)
• Off days - Sunday and Public Holidays
• Salary - 200000 - 250000 ks (Depends on experiences)
Work location 81, Thein Phyu Rd., Lower Block,Botahtaung,Yangon
We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.
We are one of the major import and export companies in Myanmar. Our headoffice is in Yangon, we have also branches in Singapore. Our company was established in 1990 and we have been in the import and export line for over 15 years. Our head office has 100 staffs and our processing plant and cold storage has 350 staffs, Our main imports are construction materials such as iron and steel, electronic and electrical appliances and other consumer goods... Our chief exports are frozen shrimp, lobster, sea water fish, fresh water fish, beans and pulses, rice and various kinds of woods. We have our own fish and prawn farms, processing plant and cold storage. Therefore, we guarantee that our products are of good quality and prices are competitive. we export our marine products to the countries in Middle-East, Europe and America.
အလုပ်ချိန် - တနင်္လာမှ သောကြာ ( မနက် 9:00 မှ ညနေ 5:30) စနေ (မနက် 9:30 မှ ညနေ 3:00) ပိတ်ရက် - တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်အချို့ လစာ - အစမ်းခန့်ကာလအတွင်း ပထမလတွင် 160,000 ကျပ် ဒုတိယလတွင် 170,000 ကျပ် တတိယလတွင် 180,000 ကျပ်
1 Day, Full time , 150 000 - 170 000 Ks, Export / Import / Trading
•	Mega Marine Frozen Seafood Co., Ltd လက်အောက်ရှိနာရီဆိုင်တွင်လုပ်ကိုင်ရန်
•	Maintains and manage human resource policies and procedures •	Recruitment and selection process •	Calculate salary for All staff (manpower 200) using with Global HR software •	Check daily attendance •	Planning for appraisal of employee
2 Days, Full time , Export / Import / Trading
•	ငွေနှင့် ငွေစာရင်းများ ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ Royal Martတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	သွက်လက်၍ စကားပြောချိုသာရမည်။ Royal Martတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	Able to work teamwork • Point Start Factory, No.78/79, R-7 လမ်းထောင့်, မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုံ၊ ဇေကမ္ဘာဝန်း တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ရမည်။
• Prepare documented results of audit work in accordance with audit department standard • Prepare timely audit reports for senior management • Responsible of leading and reviewing the work of an audit team •To coordinate and collaborate with related department for Audit Issue.
•	အလုပ်အချိန်တွင် ကွမ်း၊ ဆေးလိပ် စားသုံးခြင်း သောက်သုံးခြင်းမပြုရ။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ပါက ဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
•	အလုပ်မှပေးအပ်သောတာဝန်ချိန်အတိုင်းအလုပ်ဆင်းပေးနိုင်သူ၊ရေရှည်လုပ်ကိုင်လိုသူဖြစ်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ကာသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဆင်ယင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
•	Ground Stock များက်ိုအမှားယွင်းမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရမည်
•	သွက်လက်ချက်ချာပြီးဆက်ဆံရေးပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး တာဝန်ကျေပွန်ရမည်။ •	သတ်မှတ်ထားသည့်ရောင်းအားကို ပြည့်မှီအောင် ကြိုစားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သွက်လက်ချက်ချာပြီး ဆိုသာယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုဆက်ဆံတက်သူဖြစ်ရမည်။ (internal or external customer)
•	စကားပြောပြေပြစ် လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
•	နှစ်ချုပ်၊လချုပ်ရေးဆွဲနိုင်ပြီး အခွန်ကိစ္စများကိုလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ Royal Martတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။
•	Mingalardon Industrial Zone (Zaygabar Garden) စက်ရုံတွင် လုပ်ရမည်။ • Point Start Factory, No.78/79, R-7 လမ်းထောင့်, မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုံ၊ ဇေကမ္ဘာဝန်း။ •	အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ကောင်းစွာ ပူပေါင်းစောင့်၇ွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Customer service and problem solving attitude with excellent negotiation skills. •	Availability to travel as needed. •	Able to work under pressure.
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ Royal Martတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	ဖျတ်လက်တက်ကြွ၍ အရောင်းကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ပြီး၊ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ Royal Martတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။
•	ယုဇန ပလာဇာရှိ Electronic Show Room တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ရမည်။ •	ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရ ...
• အရောင်း ၊ ဖြန့်ချီရေး ၊ ဈေးကွက်အားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အရောင်းလမ်းကြောင်းများ ၊ အရောင်းစီမံချက်များ ၊ အရောင်း Target များဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • Daily Sales , Weekly Sales , Monthly Sales များအား Review & Analysis ...
•	အရောင်း ၊ ဖြန့်ချီရေး ၊ ဈေးကွက်အားကျွမ်းကျင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းလမ်းကြောင်းများ ၊ အရောင်းစီမံချက်များ ၊ အရောင်း Target များဆွဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Daily Sales , Weekly Sales , Monthly Sales များအား Review & Analysi ...
Sales Admin Admin,Secretarial & PA Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Mega Marine Frozen Seafood Company Limited Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Trading/Distribution Jobs in Myanmar, jobs in Yangon